Kooxaha Manchester City iyo Tottenham Hotspur oo 11 maalmood gudahood saddex jeer wada ciyaari doona! – Gool FM
Kooxaha Manchester City iyo Tottenham Hotspur oo 11 maalmood gudahood saddex jeer wada ciyaari doona!
(Yurub) 16 Maarso 2019. Waxaa gelinkii dambe ee shalay la sameeyey isku aadka siddeed dhammaadka Champions League, waxaana ka soo baxay kulamo adag sida midka dhex mari doona kooxaha Barcelona iyo Manchester United.
Kooxaha Manchester City iyo Tottenham Hotspur ayaa sidoo kale la isku beegay shalay siddeed dhammaadka Koobka Horyaalladda Yurub.
Spurs iyo Sky Blues ayaa muddo 11 maalmood gudahood ah wada ciyaari doona saddex jeer, dhammaantood saddexdaas kulan ayaana dhici doona bisha soo socda ee April.
Kulanka koowaad ayey Tottenham iyo Man City wada ciyaari doonaan 9 bisha April ee soo aaddan, waana lugta hore ee siddeed dhammaadka Champions League.
Markale ayey kooxaha reer England ee Spurs iyo Man City wada dheeli doonaan lugta labaad ee siddeed dhammaadka Koobka Horyaalladda Yurub ee UEFA Champions League 17 bisha soo socota ee April, kulankaas ayaana ka dhici doona garoonka Etihad.
Kulanka ugu dambeeya ayey markale kooxaha Man City iyo Tottenham wada ciyaari doonaan isla 20 bisha April kulankan ayaana qeyb ka ah horyaalka Ingiriiska ee Premier League, waxaana Spurs ay markale booqan doontaa garoonka Etihad, taasoo ka dhigan in labada kooxood ay muddo 11 maalmood gudahood ah wada dheeli doonaan saddex goor.
Liverpool oo kooxda Manchester United kula tartamaysa saxiixa James Rodriguez